IRoyal AM seyilidlulisele phambili icala leSekhukhune - Impempe
IRoyal AM seyilidlulisele phambili icala leSekhukhune
UMato Madlala wePSL noShauwn Mkhize weRoyal AM
Imidlalo yokuhlunga iqembu elizodlala kwiDStv Premiership, okumele iqale ngoLwesibili, kubukeka ingeke isaqala ngenxa yenzukazikeyi yecala lamaqembu eGladAfrica Championship.
Isiphithiphithi esikhona phakathi kweRoyal AM neSekhukhune United sigcine ngokuthi ngoMgqibelo inkantolo enkulu yaseGoli (High Court) ithathe isinqumo sokuthi okwanqunywa umehluleli ozimele ngeke kushintshe.
Umehluleli ozimele wanquma ukunika iSekhukhune amaphuzu amathathu ngemuva kokuthi icala phakathi kwaleli qembu nePolokwane City lalahla iCity.
Ngokesinqumo sangoMgqibelo iSekhukhune ingompetha beGladAfrica Championship nokuchaza ukuthi iziqonda ngqo kwiPremiership. IRoyal AM kumele idlale imidlalo yokuhlunga, kanti kufanele idlale umdlalo wokuqala neRichards Bay FC, eMhlathuze Sports Complex, ngoLwesibli ngo-3 ntambama.
Nokho konke lokhu kubukeka kungeke kusenzeka ngoba iRoyal AM isilidlulisele enkantolo ephakeme (Supreme Court) leli cala. Lokhu kubukeka kuzobambezela yonke into ethinta unobhutshuzwayo emazingeni aphezulu kuleli.
Ngokusho kukaMato Madlala oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiPremier Soccer League (PSL), amaqembu anemvume yokuzenelisa ngamacala aze afinyelele lapho ethanda khona.
“Lokhu kukhombisa ukuthi abantu bavunyelwe ukusebenzisa izinhlaka ezithinta umthetho zonke, akuyona nje into ebhaliwe.
“Emqulwini yethu iqala kwiDisciplinary Committee, ize ekudluliseni icala (appeal), iye kumehluleli ozimele, iye kwiReview Committee uma kunesidingo, ize ifinyelele kwiCAS.
“Siyakugqugquzela lokho. Akekho umuntu ovele atshele omunye, futhi ayikho into efihlwayo. Sithi uma uzizwa ukuthi awugculisekile nanganoma yisiphi isinqumo, unalo ilungelo lokuqhubekela phambili, ufike lapho ufika khona. Lokho asikulwisi futhi asikaze sikulwise.
“Uma ukhumbula icala likaTendai Ndoro nalo lagcina kanje, ukuthi umuntu eneliseke, agculiseke, ebese ebuyela eceleni siqhubeke nebhola. Kimi lokho yinto ebalulekile ebholeni lethu ukuthi kunomthetho ovikela thina sonke.
“Uma lo mthetho ungeke waba khona, kusho ukuthi sizovikelwa abantu abambalwa okuzothi uma bona sebethathe isinqumo, kuvunyelwane nabo. Lolo kungaba usuku olumbi kakhulu ebholeni lethu,” kuchaza uMadlala.
Previous Previous post: Ususe umsindo uPitso ‘egcona’ uMotsepe
Next Next post: Ube yistaringi uSterling ewinisa i-England